गोविन्द केसी विरुद्ध २७ डाक्टर, वार्तामा आउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह! – YesKathmandu.com
आज अपरान्ह देखि आठौं चरणको आन्दोलन थाल्ने उद्घोष गरेका डा गोविन्द केसीलाई वार्तामा आउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले आग्रह गरेका छन । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार प्रमोद दाहालका अनुसार डा केसीलाई वार्तामा आउनका लागि आग्रह गरिएको हो । डा केसीको अनसन र आन्दोलनको कुराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चिन्तित हुनुहुन्छ । दाहालले प्रधानमन्त्रीलाई उदृत गर्दै एसकाठमाडौंसँग भने ‘समस्याको निकास अनसन र आन्दोलनबाट भन्दा पनि वार्ताबाटै खोजौं भन्ने गरौं भन्ने उहाँको मनसाय हो,वालुवाटार वार्तामा आउनका लागि डा केसीलाई आह्वान गरिएको छ । ’
केसी विरुद्ध को को ?
यता डा केसीका विरुद्धमा विरुद्ध केही चिकित्सकको समूह लागि परेको छ।अनसनलाई रोक्न केही चिकित्सकको टोली वक्तव्यबाजी गर्दै विभिन्न निकायको ध्यान आकर्षण गर्न लागि परेको हो।
शिक्षण अस्पतालका पूर्व डिन डाक्टर अरुण सायमीको नेतृत्वमा डा.शशि शर्मा, रतिन्द्र श्रेष्ठ, रितुराज गर्तौला र कृष्णकुमार ओलीको समूह केसीको अनसन असफल पार्न सक्रिय रुपमा लागि परेको हो ।
केसीसँग के छ रिसइवी ?
डा. सायमी ०६६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टियु)को पोस्ट ग्राजुयट परीक्षामा प्रश्नपत्र किनबेच र परीक्षामा धाँधली गरेको आरोप लागेका व्यक्ति हुन् । सो विवादको कारणले १९ दिन शिक्षण अस्पताल बन्द भएको थियो । पूर्व शिक्षा सचिव जयराम गिरीको आयोगले छानविन गर्दा डाक्टर सायमीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर उनलाई कुनै कारवाही भएको छैन भने अख्तियार अनुसन्धान आयोगले पनि उनलाई सफाइ दिएको थियो । सायमीसँग पूर्व महराजगन्ज क्याम्पस प्रमुख डा. रामप्रसाद उप्रेती पनि सोही काण्डमा आरोपित थिए।
त्यसैगरी डा. शशि शर्मा शिक्षण अस्पतालको डिन नियुक्ति भइसकेको अवस्थामा केसीको छैटौं अनसको कारण बर्खास्त भएका थिए। उनलाई त्यतिबेला कनिष्ठ तर सत्ता रिझाएर नियुक्त पाएको आरोप लागेको थियो।
टियुले डाक्टर केसीको अनसन दमन गर्न आइओएमको निर्देशकका रुपमा पठाएका डा.रतिन्द्र श्रेष्ठले पनि केसीकै अनसनको कारण आफ्नो पदवहाली गर्न पाएका थिएनन् । बौद्धमा रहेको स्तुपा कलेजका संचालक र गर्तौला भने आइओएमको डिन नियुक्ति कमिटिका संयोजक थिए। उनको समितिले नै डा.शर्मालाई डिनमा सिफारिस गरेका थियो । गर्तौला पनि मनोमोहन कलेजका लगानीकर्तामध्ये एक हुन्।
आइओएमका निमित्त डिन विमलकुमार सिन्हाले हिजो एक विज्ञप्ती निकल्दै केसीको अनसनलाई कसैले पनि सहयोग नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
One thought on “गोविन्द केसी विरुद्ध २७ डाक्टर, वार्तामा आउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह!”
Sanat Rimal says:
Hijo samma wasta nagarne ani ke ko chintit bhanne ??
स्थानीय निकाय पुनर्संरचना लफडाले सोलुखुम्बुमा अहिले पनि मतदान हुन सकेन